मन्त्री हेरफेर गरेका ओलीको सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना, गोकर्ण भन्दा बुहारी मन्त्री योग्य !
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार साँझ मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गरेका छन् । सात मन्त्री हटाएर उनले आठ जना मन्त्री नियुक्तिका राष्ट्रपति कार्यालयमा वुधबार राती सूची पठाएका छन् । नयाँ मन्त्रीले आज सपथ ग्रहण गर्ने कार्यक्रम छ । तर, ओलीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरका विषयमा आलोचना व्यहोरेका छन् । हट्ने र नियुक्त भएका मन्त्रीको सूची सार्वजनिक भए लगत्तै प्रधानमन्त्रीको आलोचना सुरू भएको हो । सामाजिक सञ्जालमा अहिले ओलीको आलोचना भइरहेको छ । ओलीलाई आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताले समेत आलोचना गरिरहेका छन् ।
ओलीले रघुवीर महासेठ, लालबाबु पण्डित, गोकर्ण विष्ट, थममाया थापा, चक्रपाणि खनाल, मात्रिका यादव, कृषिराज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरी, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादव छन् । ओलीले घनश्याम भुषाल, पार्वत गुरुङ, बसन्त नेम्वाङ, हृदयेश त्रिपाठी, मोती दुगड, लेखराज भट्ट र रामेश्वर राय यादवको नाम मन्त्रीका लागि सिफारिश गरेका छन् ।
ओलीले उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव र भानुभक्त ढकालको जिम्मेवारी हेरफेर समेत गरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्री रहेका उपेन्द्रलाई कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ भने कानुन मन्त्री रहेका ढकाललाई स्वास्थ्य मन्त्रालय पठाइएको छ ।
खासगरी ओलीले कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएको भन्दै मन्त्री हटाएका थिए । तर, हट्ने सूचीमा सामाजिक सुरक्षा कोष सुरु गर्ने गोकर्ण विष्ट समेत परे । विष्ट पर्दा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डकी बुहारी खानेपानी मन्त्री विना मगर किन परिनन् ? भन्दै सामाजिक संजाल तातिएको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा इटालियन कम्पनी सिएमसीलाई भगाउने र आयोजना लम्बाउन लागि परेको आरोप मगर माथि छ । विष्ट आयोग्य हुँदा मगर कसरी योग्य भइन् भन्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न गरिएको छ । यस्तै ज्यान मार्ने उद्योगको आरोप लागेका पार्वत गुरूङलाई मन्त्री पदको पुरस्कार दिइएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।